Telefoonnada Gargaarka degdegga ee habeenkii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Telefoonnada Gargaarka degdegga ee habeenkii
Dalkan waa mid howlihiisu habeey-san yihiin
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 14.29
Konton sannadood muddo iminka laga joogo waxaa markii ugu horeeysay lagu tallaabsadey howl lagula xiriiri karo telefoonka degdegga habeen-nimada illaa iyo waagu ka beryo wadaaddo heegan ah sidii ey ula sheekeey-san lahaayeen ciddii la seexan weyda caqabad, murugo ama xanuun la soo gudboonaadey oo aan heysan cid kale oo ey kala sheekeystaan.
Tallaabadaa la qaadey muddo iminka 50 sannadood laga joogo ayaa sannadka foodda innagu soo haya lagu soo kordhin doonaa in sidoo kale lagu sheekeey-san karo aaladda internet-ka, sida uu sheegay oo Gunnar Åkesson, muddo labaatameeyo sannadood amuurtaa ku hoowlanaa kana howl-gala laanta maamulka kaniisadda ee nawaaxiga Lund:
- Baahida bulshadu u qabto hoowlahan ayaa la oran karaa inay tahay mid aad u ballaaran. Sannadkii ayey telefoonno nagula soo xiriiraan tiro gaareysa 65 illaa iyo 70 kun oo ruux oo noqoneeysa tiro kor u dhaafaysa 200 habeenkii, sida uu sheegay.
Dadyoowgan ayaa la oran karaa iney la soo gudboonaadeen dhibaatooyin kala duwan iyo murugo degdeg ah oo ey ugu baahdaan cid ey kala sheekeeystaan, iyaga oo middaa u arka iney caqabadda sahleeyso ama ku degeyaan maskixiyan. Gunnar Åkesson iyo mar kale:
- Midda aan sameeyno ayaa haddaba ah inaan kala xaajoono habeennimada waxa shakhsiga gubaya. Annaga oo niraahna waa inay tahay caqabad uu si degdeg ruuxu ugu baahanyahay in lagala xaajoodo ee lala sugi karin illaa maalinta xigta. Marka waxay sheekadu ku saabsan tahay ayaa la oran karaa wax ruuxa gubaya oo hurddada u diiday.
Gunnar Åkesoon ayaa noo sheegay in inta badan ay tahay luuqadda dadyoowgan lagu taageeraa luuqadda iswiidhishka, hase yeeshee ay mararka qaarkood dhacdo in ruux lagula sheekeeysto luuqadda ingiriiska, eyna adag tahay in ruux aan luuqadda iswiidhishka garaneyn loogu fidiyo taageero.
Muddadii labaatanka sannadood ee uu Gunnar Åkesson howshan gacanta kula jirey ayuu sheegay in badanaa dadyoowga la soo xiriira telefoonka taageerada ee heeganka ey yihiin dadyoow ey caqabado ka heystaan dhanka reerka, xiriirka labada qof, furriinka, ruux xannuun culus uu hayo ama geeri qarka u saaran. Mararka qaarkood waxaa dhacda ruux halgan kula jira muqaadaraad uu qabatimay:
- Iyo marar badan oo ey nala soo xiriiraan dadyoow maskaxda iimo ka qaba oo seexan kari waayey iyo qaar ku hamineya iney nolosha isaga tagaan oo ey qudha iska jaraan.
Dhammaan dhibaatooyinkaa ayey jirtaa in qoowmiyadda ajaaniiba oo soomaaliduna ka mid tahay la qabaan bulshadan iswiidhishka oo ey la dhaqan yihiin. Haddaba waa sidee tallaabooyinka ey qaadaan soomaalida kolka ey la soo gudboonaadaan dhibaatooyin nafsiyan ah. Yaasiin Ekdahl oo wax ka bartay culuunta nafsiyanka, kuna howlgala ayaan su'aashaa miiska u saarney mar aan khadka telefoonka aan wareeysi kula yeelaney:
Gunnar Åkesson sheegay in inkasta oo dadka soo waca telefoonnada degdegga ee baadariyadu badankood yihiin dad diinta krishtanka aaminsan maadama dalkan ey iyagu ugu badan yihiin ayey haddana aaney howlahooda u kala aaba yeelin caqiidada uu ruuxa la soo xiriireyaa aaminsan yahay. Isagoona intaa raaciyey in baadariyada howshan ganata ka geeystaana yihiin kuwo xirfaddooda wadaadnimo u dheertahay culuun la xiriirta howlahan sidii ey u maareeyn lahaayeen. Sidaa mid la mid ah ayuu sheegay Yaasiin Ekdahl iney culimada muslimiinta iyo ururrada soomaalidu qeyb middaa ka geeysan karaan, hase yeeshee loo baahan yahay in marka hore la siiyo tababarro iyo culuun la xiriirta cilmi-nafsiga. Middaasina oo wax ka tari laheyd gacanta loo geeysaneyo dadyoowga ey dhibaatooyinku la soo gudboonaadaan. Yaasiin Ekdahl iyo mar kale:
Fikirkaa ayuu isaguna sheegay Gunnar Åkesson inuu yahay mid ey ku dhaqmaan iyo haddii ey dareemaan inuu ruuxu u baahan yahay taageero ka baxsan midda ey siiyaan ey ku talo geliyaan tusaale ahaan iney la xiriiraan saraakiisha daryeelka caafimaadka, hoowlwadeennada arrimmaha bulshada iyo wixii la mid ah. Waa dhabbooyinka aanu ku howlgalno. Hase yeeshee ruuxu isaga ayaa xor u ah tallaabadaa, waxa aannu ku wadahadalnaana waa mid aan cid kale loo gudbin:
Hoowsha baadariyada kaniisadda ee telefoonnada gargaarka degdegga ah ayaa lagu soo kordhin doonaa gabagabada sannadka foodda innagu soo haya tallaabo ah in aaladda internetka si qoraal ah looga wada sheegkeeysan karo. Maadaama ey dadyoowga telefoonnada nagula soo xiriira habeenkii inta u dhexeeysa saacadaha sagaalka fiidnimo illaa iyo lixda aroornimo ey yihiin qeyb bulshada ka mid ah oo caadeeystey isticmaalka aaladda internet-ka iyo telefoonnada casriga, waxa loo yaqaanno Smartphone- telefoonnada caqliga badan.